Iindaba - Umatshini wokuCoca uMatshini wokuGaya uMgubo / uMcwangcisi weeRill zokuguba iLayisi
Umatshini wokuCoca uMatshini wokuGaya uMgubo / umCwangcisi weeRay lokusila iMill
Isicwangciso se-FSFG sesicwangcisi esisetyenziswa ngokubanzi kumatshini wokugaya umgubo wale mihla kunye neerayisi zokugaya ezisetyenziselwa ukusetyenziswa kwengqolowa yokugaya. Uyilo olwahlukileyo lokwahlulahlula lisebenza ngeendlela ezahlukeneyo zokuhluza kunye nezinto ezahlukeneyo eziphakathi.
-Uchungechunge lwe-FSFG Plansifter luqhutywa yimoto efakwe ngaphakathi kwesakhelo esiphambili kunye nokulinganisa okungalinganiyo. Umatshini ngamnye unama-sieve angama-4, 6, okanye ama-8 ngaphakathi. Izinto ezahlukileyo zihamba ziye kumacandelo ahlukeneyo kwindlela yazo. Ngokwendlela ayile ngayo izinto ezahlukileyo, iisefa zihluza izinto ezahlukileyo ezinamatye ahlukeneyo kwiindinyana ezahlukeneyo kwizingqusho zomgubo xa wonke umatshini usebenza.
Ubungakanani besakhelo seSieve: 640x640mm, 740mmx740mm, okanye senziwe ngokweemfuno ezizodwa zabathengi.
Isakhelo seplate yentsimbi ecinezelweyo. Iindonga zebhokisi yangaphakathi zinikezelwa ngentsimbi engenasici. Counterweight Adjustable imvelaphi inyuselwa khona SKF (Swedn) iibheringi mqengqeleki mqengqeleki ezizodwa kunye nohlobo ukuzimisa.
- Izakhelo zeSieve zenziwa ngokungeniswa kwamaplanga ngaphakathi ngaphakathi nangaphandle ngeplastiki ye-melamine lamination, eguqukayo, etshintshanayo. Izakhelo zeSieve zixhotyiswe ngeetreyi zensimbi ezingenasici. Icandelo ngalinye liphelele lixinaniswe ngesakhelo sesinyithi kunye noxinzelelo lweemicrometric screws ezivela phezulu. Kulula kwaye kuyakhawuleza ukutshintsha iskim sokuhluza.
Iivenkile zokukhupha iiplififter, kubandakanya neeplastikhi ezimnyama ezikumandla okutsala amandla omxhuzulane.
-Izixhobo zeSieve ziya kuba yimingxuma ye-SEFAR.
-Isiva esitsha seseva seNova sikwakhona, iseyile yangaphakathi yealuminium yokufuna ngakumbi ukucoceka.
Iplani yesalufa esetyenzisiweyo kwizityalo eziqhubekekayo
-Setyenziswa ngokubanzi kwiipilisi zokugaya zomgubo zanamhlanje, indawo yokulungisa ukutya okuziinkozo kunye neerayisi zokugaya irayisi.
- Ikakhulu ezisetyenzisiweyo ekuhluzweni kwengqolowa kunye nezinto eziphakathi, zinokusetyenziselwa uhlolo lomgubo.
Uyilo olwahlukileyo lokwahlulahlula lisebenza ngeendlela ezahlukeneyo zokuhluza kunye nezinto ezahlukeneyo eziphakathi.